Maitiro ekuisa Wordpress paLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Waita kumisikidzwa kwakaringana kweXAMPP mukuparadzira kwedu, izvozvi isu tichatora mukana wekuisa WordPress pamakomputa edu kukwanisa kuita bvunzo dzedu dzakakodzera, kungave kwekugadzira kana kushandura madingindira kana plugins eCMS iyi.
NeWordPress isu tine mukana wekugadzira chero chero mhando yewebhu peji nekuda kwekuchinjika kwayo uye nhamba hombe yemapulagi aripo ayo.
Kuisa WordPress paLinux
Nhanho yekutanga kurodha pasi WordPress kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti, kune izvi isu tinongofanirwa kuenda kune zvinotevera link.
Yakagadzira kurodha kwazvino vhezheni yeWodpress kuwanikwa, lInokurudzirwa kuisa iyo yakadzingwa faira muXAMPP dhairekitori usati wavhura zip.
mv latest.zip /opt/lampp/htdocs/
Unzip iyo faira:
Si Iwe unoda kuti wordpress ive iyo hombe mune yemukatihost, isu tinongofanirwa kufambisa mafaera ese nenzira inotevera.
Isu tinozvimisikidza isu mukati meiyo isina kuvharwa folda
Uye isu tinofambisa mafaera ese kuenda kunzira huru yeXAMPP:
Kutanga nekuisa WordPress paLinux
Panguva ino isu tinofanirwa kuona kuti ese maXAMPP maitiro anomhanya pasina matambudziko, inofanirwa kunge ichimhanya, php, apache uye mariadb.
Tinogona kuita iyo yekuisa graphically kubva kubhurawuza, isu tinongofanirwa kuenda kune localhost.
Iyo WordPress yekuisa uye yekumisikidza wizard ichaonekwa, sedanho rekutanga iro rinotibvunza isu kuti tigadzire database
Kana isu tinogona kuita maitiro kubva kuchironda. Zvazviri pane iyo terminal yatinoita:
Iko iko dhatabhesi izita remazwi uye mushandisi ari wodpressuser uye iro password password.
Iye zvino isu tinogona kana kusakwanisa kuita kuiswa kweakavanzika makiyi iyo WordPress inotipa kuti tive nekuchengetedzwa kwakachengeteka, izvi zvinoenderana neumwe neumwe. Kuti tiite izvi tinonyora:
Izvo zvichatipa isu mamwe maitiro atinozoteedzera sezviri mune rakasiyana manotsi blog.
Isu tinotumidza zita rinotevera faira yakawanikwa mukati meiyo WordPress dhairekitori:
Waita izvi isu tinofanirwa kugadzirisa inotevera faira uye nekuisa ruzivo rweDB:
Tsvaga mitsara inotevera uye kutsiva inoenderana inofanirwa kunge iri seinotevera:
Ivo vanofanirwa zvakare kutarisa chikamu che:
Kupi Vachaisa makiyi epachivande akawanikwa kare.
Sevha uye uvhare iyo faira.
Zvino isu tinongofanira kudaro enda kubhurawuza redu uye nyora uye enda kune localhost, isu tinobvunzwa kupedzisa iyo yekuisa maitiro. Izvo zvinotikumbira isu kusarudza mutauro, pamwe nekupa zita rekushandisa uye password izvo zvichatibatsira kuisa iyo WordPress dashibhodhi.
Iro zita rekushandisa nephasiwedi zvichagadzirwa semaneja, uye kana vachida kushandisa imwe mhando yemushandisi yavanogadzira mune sarudzo dzinopihwa neWordPress
Dzimwe nguva inobvunza iyo data yeiyo dhatabhesi yekumisikidza, unogona kuiisa kumashure. Izvi zvinoitika nekuda kwecache nyaya, unogona kuzvichenesa uye kurodha bhurawuza rako kudzivirira izvi.
Nezvo, une WordPress yakaiswa pane yako system kuti iwe ugone kuita bvunzo dzako.
Kuisirwa kuri nyore, ini ndanga ndisingade kudzika nekuti kumisikidzwa kweiyo CMS kune zvakawanda uye zvakare kunoenderana nemushandisi.
Iwe unogona kutamba uchitenderedza neiyo PHP.ini tsika kuti uzvigadzirise kune ako ekushandisa eWordPress pamwe nekuwedzera marongero kune .htaccess faira inowanikwa mukati meiyo huru WordPress dhairekitori.
Sezvo ini ndichitaura, izvi zvatoenderana nezvinodiwa zvako uye paine ruzivo rwakawandisa pamambure nezve izvi, unogona kuvimba neiyo WordPress kodhix kuti uzive zvakawanda nezvazvo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuisa WordPress paLinux?
Maitiro ekuisa XAMPP paLinux?